Tian’ny Ejipsiana Haongana ny Fitondrana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2013 0:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Français, Português, русский, Dansk, srpski, عربي, Català, 한국어, English
Nomarihin'ny vahoaka Ejipsiana ny [30 Jona] ny fahatsiarovana ny nitondran'ny filoha Mohamed Morsi voalohany ny firenena, miaraka amina famoriam-bahoaka goavana nanerana an'i Ejipta, niantsoana azy handao ny toerany. Fampielezan-kevitra manohitra an'i Morsi atao hoe Tamarrod [ar], izay midika hoe fanoherana, no manamafy fa 22 tapitrisa ireo sonian'olon-tsotra voaangona hatramin'izao, izay miantso fifidianana filoha haingana.
Araka ny mpanao bilaogy Ejipsiana Nermeen Edrees:
@NermeenEdrees: Nalain'ireo vahoaka teo indray izay napetrany ny febroary 2011 #Egypt
Manazava i Wael Khalil fa [ar]:
@wael: Maniry ny hanongana fitondrana ny vahoaka… Tena marina….
Ny 25 Janoary 2011, nanohitra ny fifehezana nandritra ny 32 taona nataon'i Hosni Mubarak ireo vahoaka Ejipsiana. Valoambinifolo andro taty aoriana, nametra-pialàna i Mubarak. Nandritra ny fotoana nisian'ny tetezamita, nentin'ny Filankevitra Ambonin'ny Tafika Mitam-piadiana [CSFA] i Ejipta. Taorian'ireo fifidianana, Morsi, ilay kandidàn'ireo Mpirahalahy Silamo, no naka ny toeran'i Mubarak, nanjary filoha ny 30 Jona 2012. Ankehitriny, midina andalam-be indray ireo vahoaka Ejipsiana mangataka an'i Morsi hiala sady hamarana ny fitondran'ireo Firahalahiana Silamo any Ejipta.
Vahoaka Ejipsiana manao fihetsiketsehana any amin'ny kianjan'i Tahrir. Sary nozarain'i @LamiaHassan tao amin'ny Twitter
Mitatitra ny mpanao gazety Mohamed Abdelfattah fa:
@mfatta7: Toa misy ireo fihetsiketsehana ao anatin'ireo tanàna sy ireo sakelidàlana izay mbola tsy nanaovan'ny vahoaka izany mihitsy teo aloha #Egypt.
Nanomboka nivondrona teo amin'ny kianjan'i Tahrir, ilay ivon-toeran'ny fitakian'ny vahoaka Ejipsiana ao afovoan-tanànan'i Caire, ireo mpanohitra, nanomboka ny 29 Jona. Any Caire irery ihany, fiaraha-mizotra maro no nokarakaraina ny 30 Jona, hizotra ho any amin'ny kianjan'i Tahrir sy ny lapam-panjakana. Ankoatr'izay, ireo fiaraha-mizotra sy fihaonam-be manohana an'i Morsi koa dia nisy natao nandritra ny roa andro teo aloha ary mitohy mandraka ankehitriny. Ny atahorana dia ny fifandonana eo amin'ny mpomba an'i Morsi sy ireo mpanohitra azy, ny herisetra miharo fandatsahan-drà.
Tranolay napetraka teo amin'ny kianjan'i Tahrir ny alin'ny fikarakarana ny andron'ny [30 Jona] fanoherana an'i Morsi tany Ejipta. Sary nozarain'i @JanoCharbel tao amin'ny Twitter
Mizara ahiahy hafa ny mpanao bilaogy Zeinobia:
Nametraka fampitandremana mikasika ny fivahinianana any Ejipta ny departemantam-Panjakana amerikana. Mino aho fa rariny izany, indrindra taorian'ny namonoana ilay teratany amerikana iray, Andrew Pochter, nandritra ireo fifandonana tany Alexandrie omaly. Ireo Tantsambo amerikana koa dia efa toy ny sahobakaka ambody riana any Eoropa Atsimo mba tsy hitranga indray ao Caire izay nitranga tany Bengazi.
Tokony ho fantatrareo fa misy ireo antso avy amin'ny Fatra-pandàla ny Nasionalisma/Miaramila/Mpandàla ny foto-kevitr'i Nasser ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hanohitra fotsiny fa koa haka an-keriny ny masoivoho amerikana. Ireo antso ireo izay vokatry ny toe-pò nahazo vahana amin'ny fankahalàna Amerikana amin'ireo tsy silamo satria mino izy ireo fa ny fanjakana Obama dia mitanila amin'ny MB. Tena hankahalaina fatratra ny ambasadaoro amerikana Anne Paterson ary maro ireo ejipsiana mihevitra azy ho dika amerikanin'i Lord Cromer.
Mino aho fa hankamamian'ny MB ny handravan'ireo mpanoa hetsi-panoherana ny ambasady amerikana, mitranga izany raha toa ka tsy manan-kantenaina amin'ny Washington intsony ireo mpanohitra azy ireo ara-politika sy ny tafika Ejipsiana .
Ratsy ho an'ireo vahoaka ejipsiana ny taona voalohany nitondran'i Morsi, vokatry ny tsy fisian'ny solika sy ny herinaratra, ankoatr'ireo fahasorenana maro. Manazava i Jasmine Elnadeem hoe:
@Selnadeem: Maro amin'ireo vahoaka no nilaza fa tsy misy solika ny fiarany, tsy afaka mandeha miasa izy ireo ary nanapa-kevitra ny hanatevina laharana ny fanoherana any #Tahrir. #Egypt #30_june
Mahery fò Ejipsiana iray sy mpanao bilaogy i Alaa Abd El Fattah no mizara izao rakitsoratra manaraka izao ao anaty Facebook [ar]:
Raha nanadala ahy noho ny adin-tsaina nanjo ahy ny reniko ary nanome lesona ahy ny amin'izany, rehefa nidina andalam-be ny vahoaka mba hanongana ireo mpitondra azy, avy eo ity no hany tombony tokana tsy hampisy dikany intsony ny drafitra rehetra sy firaisana tsikombakomba nataon'ireo mpanararaotra tsy manana ny maha-izy azy, nanapa-kevitra ny haka ny lafin-tsarany aho. Rahampitso, ho tsara kokoa, n'inona n'inona mitranga.
Mba hampiraisana ny tsanganan'ireo mpitaky fanovàna, maniry ny hankatoavan-tsika an'ireto teboka manaraka ireto aho:
* mba hanongana ireo rehetra mampijaly sy mamono vahoaka, ary hanome henatra azy ireo
* mba hanonganana ireo rehetra izay mangalatra amin'ny vahoaka, manimba ireo fonenany, fahasalamana ary ny tontolo manodidina azy
* mba hanonganana ireo rehetra izay mandà ny fahasambaran'ny vahoaka, ireo nofinofiny ary ireo hetahetany, na izany avy amin'ny fangejana, ny fahantrana na ara-moraly
* mba hanonganana ireo rehetra izay miara-dalana na mifampiraharaha amin'ireo Sionista
* mba hanonganana ireo rehetra izay manana fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fankatoavan'ny amerikana
* mba hanonganana ireo rehetra izay manam-pahefana tsy nankatoavin'ny vahoaka, ary ireo rehetra izay mitondra manohitra ny fankatoavan'ny vahoaka
* mba hanonganana ireo rehetra izay nanampy ny iray amin'ireo izay nanantanteraka heloba bevava etsy ambony ireo, handositra ny andraikiny
Maro ireo voasarika hanaraka ny fanoherana:
Nibitsika i Donia Iskandar fa [ar]:
@Donia_Iskandar: Mandro avokoa ny rehetra, misotro dite na kafe, mipetraka miaraka amin'ny fianakavianareo mandritra ny fotoana fohy, mivavaka, ary midinà andalam-be mba hanohitra an'i Morsi sy ny Firahalahiana Silamo.
Ireo hafa manome toro-marika ireo mpanohitra mba hitandrina ety anaty aterineto. Mibitsika i Lobna Darwish:
@lobna: Vonoy ny fanavaozam-baovao ara-potoana avy amin'ny mailakareo sy amin'ireo findainareo rehefa mampiasa ny tambajotra misokatra manodidina ny lapa ry zareo ary aza mampiditra ireo tenimiafina, na dia mampiasa https aza ianareo.
@lobna: Aza manome vaovao amin'ny aterineto raha toa tsy tianao ho azon'ny fiarovam-panjakana, ny miaramila, Morsi na ny reninao rehefa any amin'ny manodidina ny lapa ianao.
Ary nandràra ireo mpanohitra i Bassem Sabry mba tsy hihinana na hisotro zavatra omen'ireo vahiny, taorian'ny nanapoizinana ireo mpanao fihetsiketsehana tany Alexandrie rehefa nisotro rano voapoizina nandritra ny fihetsiketsehana:
@Bassem_Sabry: Tsy misy mahazo mandray sakafo sy rano avy amina olon-tsy fantatra. Misy ireo tatitra mikasika ny fanapozinana ireo mpanao fihetsiketsehana taorian'ny fizarana ireo tavoahangin-drano avy amin'olona tsy fantatra.
Mpomba an'i Morsi mirongo ireo hazo sy fiarovana any Caire androany. Sary nozarain'i Kareem Fahim(@kfahim) tao amin'ny Twitter
Efa nanomboka ny andron'ny hetsika ary angamba mba tsy hilaozan'izay hisy zava-mitranga.
Nitatitra i Evan Hill mpanao gazety fa:
@evanchill: Big column of maybe 150 men jogging through rally with sticks and helmets, maybe half of them with matching metal sheet shields….. @evanchill: Tsanganan-daharana ankevitry ny ho lehilahy 150 mihazakazaka miaraka amin'ireo hazo sy satroby, ny antsasany amin'ireo angamba mitondra ampinga fiarovana.
Ny tatitra nataony dia mifandraika amin'ny sary izay nozarain'i Kareem Fahim tao amin'ny Twitter, izay mampiseho ireo mpomba an'i Morsi, mirongo hazo sy ampinga fiarovana ary satroby.
Mijanona mihaino mba hahazo tatitra bebe kokoa avy any Ejipta mikasika ny fizotry ny tontolo andro.